ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒါတွေသိရဲ့ လား..? ~ ITmanHOME
02:40 knowledge No comments
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဒါတွေသိရဲ့ လား..?
၁။ အပိုလို -၁၁ လွန်းပျံယာဉ်သည် စက္ကန့် ၂၀ စာသာ လောင်စာကျန်တော့ချိန်၌ လကမ္ဘာပေါ်သို ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ လီဟာဗေးအော့စ်ဝိုးဧ။် အလောင်းကို မှတ်သားသည့် သတ္တုပြားကလေးကို ၁၉၉၂ ခုနစ် လေလံပွဲတစ်ခုတွင်ရောင်းချခဲ့ရာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ၆၀၀ ရရှိခဲ့သည်။
၃။ ၁၈၃၀ ပြည့်နှစ်လွန်များအတွင်းက ခရမ်းချဉ်သီးကဲ့သိုသော အရာများမှ ပြုလုပ်သည့် အချဉ်ရည်များကို ဆေးဝါးအဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။
၄။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီသည် လက်တစ်ဖက်က စာရေးနေချိန်၌ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အခြားတစ်ဖက်က ပုံဆွဲနိုင်သည်။
၅။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီသည် ကတ်ကြေးကို တီထွင်သူဖြစ်ပြီး တယောထိုးသူလည်းဖြစ်ကာ မိုနာလီဇာဧ။် နှုတ်ခမ်းများကို၁၂ နှစ်ကြာ အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့သူဖြစ်သည်။
၆။ ကာရေဘီယန်ကျွန်းစုများအနက် လူနေသောကျွန်းမှာ တစ်ရာခိုင်းနုန်းသာ ရှိသည်။
၇။ သွေးလှူဒါန်းသူ အရေအတွက်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေဧ။် ခုနစ်ရာခိုင်းနူန်းပင်မပြည့်ပါ။
၈။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ရေပြင်အားလုံးဧ။် နှစ်ရာခိုင်းနူန်းသာလျှင် ရေချိုဖြစ်သည်။
(မှတ်ချက် မြန်မာ့သင်္ကြန်က ရေချိုတွေဘယ်လောက်ဖြုန်းပစ်လဲ မသိပါ)
၉။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၈၇သန်းကျော်တို့ဧ။် ရှေ့ဆုံးအမည်စာလုံးမှာ 'လီ' ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လျှပ်စီးလက်သည့်အကြိမ်မှာ တစ်မိနစ်လျှင် အကြိမ်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
၁၁။ ပုစွန်တုပ်များဧ။် သွေးသည် အပြာရောင်ရှိသည်။
၁၂။ လီမွန်ငါးမန်းတို့သည် ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လျှင် သွားအသစ်တစ်စုံးနူန်း ထွက်လေ့၇ှိသည်။ သူတို့သည် တစ်နှစ်လျှင် သွားအသစ်ပေါင်း ၂၄, ၀၀၀ ကျော် ထွက်လေ့ရှိသည်။
၁၃။ ၁၉၆၉ ခုနစ်တွင် လာရီလူးဝစ်သည် ကိုက် ၁၀၀ အကွာအဝေးကို ၁၇.၉ စက္ကန့်ဖြင့်ပြေးပြပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူဧ။်စံချိန်မှာ အသက်၁၀၀ နှင့်အထက် အသက်အုပ်စုတွင်ဖြစ်သည်။သူဧ။်အသက်မှာ ၁၀၁ နှစ်ဖြစ်သည်။
၁၄။ လေဒီအက်စတာသည် တစ်ခါက ဝင်စတန်ချာချီအား " ရှင်သာ ကျမရဲ့ ခင်ပွန်းဆိုရင် ရှင်သောက်မယ့် ကော်ဖီခွက်ထဲကို အဆိပ်ခပ်မှာပဲ " ဟု ပြောခဲ့ဖူးပြီး " မင်းသာ ငါ့ဇနီးဆိုရင်လည်း ငါက အဲဒီကော်ဖီခွက်ကို သောက်မှာပေါ့ဟု ဝင်စတ်ချာချီက ပြန်ပြောခဲ့ဖူးသည်။
၁၅။ သိုးမွေးထိုးခြေအိတ်များကို ရှေ့ဟောင်းအီဂျစ်သင်္ချိုင်းဂူများတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အစောဆုံးမှာ အေဒီသုံးရာစုဖြစ်သည်။
၁၆။ Killer Whales ဟုခေါ်သော ဝေလငါးမျိုးသည် အထိအတွေ့အာရုံ၌ အလွန်ထက်မြက်ရာ အကယ်ရ်ျ သင်သည်ဆေးပြားတစ်ပြားကို ပုံးတစ်ပုံးတွင် ထည့်ပြီးယင်းကိုအော်ကာငါးများကိုကျွေးခဲ့လျှင် အဆိုပါ ဝေလငါးသည်အော်ကာငါးကိုစားပြီး ဆေးပြားကို ပြန်ထွေးထုတ်လိမ့်မည်။
၁၇။ တစ်သျှူးပေပါစများကို မူလက ဓာတ်ငွေ့ကာမျက်နှာဖုံးများတွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၈။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အက္ခရာအနည်းဆုံး ဘာသာစကားမှာ နယူဂီနီန်ိုင်ငံရှိ ရိုတိုကပ်စ်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင်အက္ခရာ ၁၁ လုံးသာ ပါဝင်ပြီး ယင်းတို့မှာ A,B,E,G,I,K,O,P,R,T နှင့် US တို့ဖြစ်သည်။
၁၉။ ဒေါက်တာ အလက်ဇန်းဒါးဝုဒ်သည် ဆေးထိုးအပ်ကို ၁၈၈၂ ခုနစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။
၂၀။ ဂျပန်ဘာသာစကားတွင် နံပါတ် ၄ နှင့် သေးဆုံးသည်ဟူသော စာလုံးနှစ်လုံးသည် လည်းကောင်း၊ နံပါတ် ၉နှင့်နာကျင်မှုဟူသော စားလုံးနှစ်လုံးသည် လည်းကောင်း အသံထွက်ချင်းအတူတူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိဟိုတယ် များဧ။် အခန်းနံပါတ်များတွင် ၄ နှင့် ၉တို့ မရှိပါ။
၂၁။ ဘီးခုံးပုံသဏ္ဌာန် ဝီစကီဖန်ခွက်ထဲသို့ အရက်တစ်ဝက်ခန့် ဖြည့်ပြီးပါက ၅၀ ရာခိုင်းနုန်းဖြည့်ပြီးပြီဟု မထင်ပါနှင့်။အမှန်တကယ် ၁၂- ၁၃ ရာခိုင်နုန်းခန့်သာ ရှိသေးဧ။်။
၂၂။ သင်သည် သင်ဧ။်တံတောင်ဆစ်အား လျှာဖြင့်လျက်ရန် ကြိုစားခဲ့ဖူးပါသလား။ ကြိုးစားခဲ့ဖူးလျင်တောင်မှဘယ်သောအခါမှ အောင်မြင်ခဲ့လိမ်မည် မဟုတ်ပါ။ ယင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မဖြစ်နိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။
၂၃။ Pherenology ဟူသည်မှာ လူတစ်ယောက်ဧ။် ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်ကို ကြည့်ရ်ျ သူဧ။်စရိုက်လက္ခဏာကို နားလည်နိုင်သော ရှေ့ဟောင်းသိပ္ပံပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၂၄။ အာဖရိကငှက်ကုလားအုတ်တစ်မျိုးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဥအကြီးဆုံးဥသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဥခွံသည် ၁.၅ မီလီမီတာထူပြီး ဥတစ်လုံးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူတစ်ယောက်ဧ။် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ညီမျှသည်။
၂၅။ ရှားပါးသော အကြောက်လွန်ရောဂါတစ်မျိုးမှာ Lutraphobia ခေါ် ဖျံများကို သေမလောက်ကြောက်ရွံ့ သည့်ရောဂါဖြစ်သည်။
credit ထူးထူးဆန်းဆန်း FB